ImgBurn Mac / Mavericks? Download ImgBurn maka Mac Alternative maka Free
> Resource> Mac> ImgBurn Mac? Download ImgBurn maka Mac (El Capitan gụnyere) Alternative maka Free
ImgBurn, dị ka aha ya na-egosi, bụ a pụrụ ịdabere free DVD ọkụ software. Ya-enye gị iji tọghata, iru, nyochaa na ide image faịlụ ka DVD na ọbụna Blu-ray Disc dị iche iche ụdịdị. Otú ọ dị, ọ bụ naanị na-agba na Windows n'elu ikpo okwu, gụnyere Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, XP, 2000, wdg Ọ bụrụ na ị chọrọ DVD-ere ọkụ software yiri ImgBurn na-arụ ọrụ na Mac (Ọdụm ugwu, ọdụm gụnyere), ị ' Eh mkpa ka onye ọzọ na ImgBurn maka Mac.
E nwere ọtụtụ ImgBurn uzo ozo na-enye yiri atụmatụ ImgBurn. My aro bụ Wondershare DVD Creator for Mac. Nke a ImgBurn maka Mac ọzọ na-agụnye fọrọ nke nta niile atụmatụ na ImgBurn nwere. Ọ na-enye adaba editings ngwá ọrụ dị ka bugharia, Kpaa, akuku, mmetụta, wdg na njikere na-eji menu ndebiri inyere eke ahaziri DVD. Na niile, ọ bụ nnukwu onye na-enyere ọkụ nile di iche iche nke mgbasa ozi faịlụ ka DVD ọsọ ọsọ na mfe. Nye ya a na-agbalị for free.
Ọkụ ọ bụla videos / Image faịlụ ka DVD na Mac nzọụkwụ site nzọụkwụ
1 mbubata gị isi iyi videos
Run ImgBurn ọzọ maka Mac. Na mgbe ahụ họrọ ike ọhụrụ oru ngo ịbanye omume window. (Lee n'okpuru image). Mbubata gị isi iyi videos, biko ịdọrọ vidiyo ma ọ bụ foto kpọmkwem n'ime usoro ihe omume. Alternatively, ị nwere ike pịa "+" bọtịnụ mara ha. Ọ bụrụ na ị chọrọ otu a ole na ole videos ọnụ na-etolite a isi ma ọ bụ ikewapụ ha, dị nnọọ ịdọrọ clip nke ebi ndụ gị chọrọ oru.
Cheta na: Nke a ImgBurn maka Mac-akwado ndị niile nkịtị video formats na Mac: AVI, FLV, mpg, MP4, M4V, 3GP, 3G2, MOV, TS, TP, TRP, M2TS, MTS, MKV, WMV, MOD, ASF, DAT, F4V, VOB, NSV, RMVB, DivX, na ndị ọzọ.
2 Dezie video faịlụ na ala
Nke a na usoro mfe eme ka gị na video anya mma site edezi ngwaọrụ dị ka video mmetụta, Kpaa, akuku, bugharia, Watermarks, wdg Ugbu a ị na-erite ike niile ike edezi DVD ọdịnaya.
E wezụga edezi videos tụsaara, ị nwekwara ike itinye ọkacha mmasị gị menu ịke welie DVD video. E nwere dị iche iche DVD menu ekwekọghị agbakwunyere na a Imgburn ọzọ maka Mac, gụnyere ọkọlọtọ, ọhụrụ, ezinụlọ, ezumike, wdg Ka ịnweta NchNhr ndebiri, dị nnọọ pịa NchNhr taabụ, ma bulie otu ka n'ihu hazie ya.
3 Ọkụ DVD na Fast Speed ​​na elu àgwà
Nke a ImgBurn maka Mac ọzọ na-ewe zuru uru gị DVD ọkụ ngwaike na imebi ọma n'etiti ọsọ na mma. Ọ bụla ị chọrọ ka ọkụ DVD diski nke na-ekiri na TV ma ọ bụ n'ihi nkwado ndabere na mpaghara, ị ga-enwe obi ụtọ na nke a ImgBurn maka Mac ọzọ. SupperDrive, DVD nchekwa, ISO Image, ma ọ bụ .dvdmedia mmepụta format bụ niile dị na otu ebe.
Ihe banyere ImgBurn for Alternative
Ọ bụ ezie na ImgBurn bụ otu nke kasị mma freeware, ọ mkpọka ndusụk na adịghị enye keukwu oru nkwado. Dị iche iche, Wondershare DVD Creator for Mac (Ọdụm ugwu akwado) bụ a na-anwale ma ruru eru DVD authoring software na anụ arụmọrụ. Ị ga na-na-f ree upgrades na nzi ahịa ọrụ always.If ị na-achọ na-atụgharị foto na vidiyo na DVD-eji ire ụtọ ikwu n'ụzọ ma mara mma DVD menu ndebiri na Windows, Wondershare DVD Creator bụ ezigbo ImgBurn nnọchi maka Windows Vista / XP / 7 na Windows 10/8.
Free download ImgBurn ọzọ maka Mac na Windows (ikpe version):